Fitetezana Ranomasimbe Manao Sarintanin’ny Dian’i Magellan Nankao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Fitetezana Ranomasimbe Manao Sarintanin'ny Dian'i Magellan Nankao Filipina
Voadika ny 04 Febroary 2018 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Română , Français, Español, 日本語, Italiano, English
Pikantsary avy ao amin'ny bilaogin-dahatsarin'ny Mayan Around Town, fitsidihan'i Fleur de Passion tao Cebu, Filipina.
Hanamarika ny faha-500 taonan'ny dian'i Ferdinand Magellan nitety ny tany ny taona 2021. Alohan'izay andro manantantara izay, nitaingina sambolay nanaraka ny diany ireo mpikaroka notarihan'ny Foundation Pacifique, fikambanana tsy mitady tombony mipetraka ao Zeneva. Mikendry ny hikaroka ny fiantraikan'ny olombelona amin'ny ranomasimbe sy ny tontolo iainana ity fitsangantsanganana nandrafetana sarintany ity. Tamin'ny Aprily 2015, mba hamerenana ny dian'i Magellan, niala sambo avy tao Seville tao Espaina ny ekipa fikarohana ho ampahany aminà fitetezana haharitra efatra taona izay hitondra azy ireo hitety ny tany.
Pikantsarin'ny sarintan'ny dian'ny Fleur de Passion avy amin'ny tranonkalan'ilay fitsidihana.
Portogey mpikaroka i Magellan izay niala sambo avy tao Sevilla, Espana tamin'ny 1519 ary nanomboka ny diany izay lasa ho voalohany voarakitra amin'ny fihodidinana an-dranomasina ny Tany. Nitondra tany amin'ny fanjanahan'ny Espaniola ny nosy Filipina ny fahatongavany tao Cebu tamin'ny 1521.
Tonga tao Filipina ny sambo fikarohana Fleur de Passion, sambo Alemàna efa antitra mpanala baomba miafina izay nalàna ny fitaovampiadina tamny ary namboarina ho an'ny fikarohana ara-tsiantifika, ary niantsona tao Cebu, Lapu-Lapu, tanàna afovoan'i Filipina tamin'ny 19 Desambra 2017. Ampahany amin'ny tetikasany, nasain'ny tarika ireo mponina tao an-toerana ho eny ambonin'ilay sambo mba hampianarana ny vahoaka ny momba ny fikarohany sy ny asa fisoaloana vava ataony. Nanoratra momba izay niainana ilay bilaogera mipetraka ao Cebu Mayan Around Town ary nanangana bilaogin-dahatsary iray niaraka tamin'ireo tantsambon'ny Fleur de Passion:
Miaraka miasa betsaka amin'ireo manampahefan'ny tanàna Soisa any Zeneva, manome fandaharanasa isankarazany ara-kolontsaina sy fanabeazana ho an'ny daholobe ilay fitetezana ranomasimbe hanaovana sarintany.
Nasongadin'ny sasany tamin'ireo asa siantifika teny an-tsambo ireto manaraka ireto:
Ny Feo 20.000 ambanin'ny Ranomasina, fandaharanasa iarahana amin'i Michel André, bilolojista sy injeniera izay mandrakitra ireo feon'ny ranomasina mba handrefesana ny fandotoana ara-peo vokarin'ny olombelona.
Ny fandaharanasa Micromégas miaraka amin'ny Oniversite Polyteknika Federalin'ny Lausanne izay hidiran'ny fakàna santionan'ny ranomasina eny amin'ny faritra ambonin'ny ranomasimbe mba hanombanana ny ambaratongan'ny fandotoana ara-plastika.
Ny fandaharanasa Rivotry ny Fiovana miaraka amin'ny Oniversiten'ny Zeneva natomboka tamin'ny Novambra izay manaramaso ny tahan'ny entona metàna sy karbonika ao anatin'ny ranomasimbe mba hahafahana mamantatra kokoa ny fihafanan'ny tany.
JEREO: Nijanona tao Macta, Cebu ny sambo Soisa Fleur de Passion, ao anatin'ny fihodidinany ny tany manontolo hitety ny ranomasimbe mba fanaovana sarintany. Ampahan'ny fiteezany ny manangona tahirinkevitra momba ny plastika ao anatin'ny ranomasimbe, fanafotsiana ny harandranomasina, ary ny tahan'ny entona miteraka hafanàna @cebudailynews pic.twitter.com/v43KKXLZ17
Amporisihan'ilay fitetezana ihany koa ireo fandraisana an-tanana amin'ny fanabeazana, toy ny fandaharanasa fanabeazana Ny Tanora any An-dranomasina, izay manasa ny tanora hijanona eo ambonin'ny Fleur de Passion mandritra ny roa volana mba hiaina tanteraka sy feno ny fiainana maha-tantsambo eny an-dranomasina. Hatramin'ny 2015, 34 teo ireo tanora no nandray anjara tao anatin'ilay fandaharanasa. Tafiditra amin'ny tetekasa ara-javanìkantony, atolotr'ilay sambo ihany koa ny fandaharanasa Fitaratry ny kolontsainan'i Magellan, izay anasàny mpanao sariitatra avy ao Soisa sy avy amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao mba ho tonga ao an-tsambo ary hanao sary fanaingoana hanazavana ho an'ny mpanatrika marobe ny iraka tontosain'ilay fitetezana ary ireo fandaharanasany.
Ny faha-20 Janoary, nanaraka ny fitanjozorana tanaty renirano Translacion Sinulog tamin'ny taona ity ilay sambo nialohan'ny hiaingàny hamonjy an'i Puerto Galera, Mindoro, fiantsonany manaraka ao amin'ny diany. Mitondra ny sarin’i Señor Santo Niño, ilay mpiaro an'i Cebu ny Translacion, tamin'ny alàlan'ny Fantsona Mactan, andro iray mialohan'ny Matso Lehibe Sinulog fankalazàna ny nanaovana an'i Cebu ho mpanaraka ny finoana Kristianina. Voalaza fa nasehon'i Magellan tany amin'i Juana , Mpanjakavavan'i Cebu, ny sarin'ny Señor Santo Niño ho ampahany tamin'ny fiovampon'ny teratanin'i Cebu hanaraka ny Kritianisma. Ny anaran'ny tanànan'i Lapu-Lapu ao amin'ny Nosy Mactan va nomena avy amin'ny anaran'ilay mpiadidy Lapu-Lapu izay ny olony no namono an'i Magellan ho fanoherana fibodoan'ireo Espaniola mpanjanaka.
Naka sary an'ilay matso tanaty reniranon'ny Sinulog avy eo amin'ny tokotanin-tsambo ilay Filipiàna bilaogera mpiresaka lamaody, David Guison:
Matso anaty renirano Sinulog 🎉 📍 Cebu, Philippines pic.twitter.com/BP3QrXCHqF
Napetraka tamin'ny 2007, nanao fitetezana maro momba ny fanabeazana, kolontsaina ary siantifika mba hanampiana hahatakatra ny fiantraikan'ny olombelona amin'ny ranomasimbe ny Fikambanana Pacifique. Afaka jerena eo amin'ny tranonkalany ny dian'ny Fleur de Passion ary afaka jerena eo amin'ny pejiny Facebook sy ny fantsony Youtube ireo vaovao farany. Voalahatra ny hamita ny dian'i Magellan amin'ny Aogositra 2019 ilay sambo.